Qarax gaari uu lahaa Ruux Injineer ah oo goordhow ka dhacay Magaalada Muqdisho+ COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Qarax gaari uu lahaa Ruux Injineer ah oo goordhow ka dhacay Magaalada Muqdisho+ COD
Qarax miino oo horey loogu soo xiray gaari SURF ahaa, ayaa maqribnimadii caawa waxa uu ka dhacay xaafada Taleex ee Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir. Waxaana uu dhaawacyo culus ka soo gaaray laba nin oo la socotay.
Qaraxaasi, ayaa lagu soo xiray gaari uu lee yahay nin injineer ah oo gacanta ku haaya dhisme laga wado xaafada Taleex, gaar ahaan meel ku dhow Masaajidka Ramadaan.
Gudoomiyaha Degmada Hodan ee Maamulka Gobolka Banaadir C/qaadir Cali Kullane, ayaa sheegay in gaariga ay la socdeen nin injineer ah iyo darawalkiisii. Wuxuuna intaa ku daray in xaaladoodu ay tahay mid liidato.
Gudoomiyaha, ayaa xusay in labaduba la dhigay Isbitaalka Daaru Shifaa, oo iminka lagula tacaalaayo xaaladooda caafimaadeed, sida uu yiri.
Maxamed Yuusuf Cismaan, Afhayeenka Wasaaradda Amniga Qaranka oo Saxaafadda kula hadlay halka uu qaraxu ka dhacay, ayaa labadaasi ninba ku sheegay inay injineero ahaayeen.
Laakiin warar madax banaan, ayaa waxay xaqiijinayaan in mid oo kaliya uu injineer ahaa, halka midka kalana uu ahaa wadihii gaarigiisa.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga, ayaa Ururka Al Shabaab ku eedeeyay qaraxa lagu soo xiray gaariga, ayna yihiin kuwo ka soo horjeedo horumarka dalka iyo dadka, iyagoona dilaaya buu yiri cid kastaa oo bulshada muhiim u ah.